Whole Sales Supervisor Archives - Glory Assumption Space
Whole Sales Supervisor Male/Female (6) Posts / Salary - 25,000 Kyats
************************* Ugarent Requirement ************************* 1. Whole Sales Supervisor Male/Female (6) Posts / Salary – 250,000Kyats. Shwe Pyi Tar Township. - တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိရမည်။ - စားးသောက်ပိုင်းတွင်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )